Lamjung Manang News | » शहर गएकालाई गाउँ फर्काउन खाँचेमा तामाङ होमस्टे सञ्चालन शहर गएकालाई गाउँ फर्काउन खाँचेमा तामाङ होमस्टे सञ्चालन – Lamjung Manang News
शहर गएकालाई गाउँ फर्काउन खाँचेमा तामाङ होमस्टे सञ्चालन
लमजुङ १४ बैशाख ।
ग्रामीण पर्यटनको माध्यमले देश विदेशमा नाम कमाएको घलेगाउँको सिको गर्दै लमजुङको अर्को गाउँले पनि होमस्टे शुरु गरेको छ । बेसीशहर नगरपालिकाको वडा नं. १० मा पर्ने खाँचे गाउँमा होमस्टे शुरु भएको हो ।
पर्यटनको माध्यमबाट गाउँमा समृद्धि ल्याउन र सुविधा र रोजगारीको खोजीमा गाउँ छोडेर अन्यत्र गएकालाई गाउँमा फर्काउन खाँचेबासीले होमस्टे खोलेका हुन् ।
सदरमुकाम बेसीशहर नजिकै रहेको खाँचे गाउँका स्थानीयले परम्परागत संस्कृतिको संरक्षणसंगै आम्दानीबो ढोका खोल्न गाउँमा घरबासको ब्यवस्था मिलाएका हुन् ।
तामाङ संस्कृतिले भरिपूर्ण रमणीय खाँचे गाउँमा रहेको ४५ घरमध्ये अहिलेलाई १९ घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ । एउटा घरमा ८ जनसम्म पर्यटक बस्न सक्छन् । सबै घरमा गरी १ सयको हाराहारीमा पर्यटक बस्न सक्ने गरी ब्यवस्था मिलाइएको छ । ती सबै घरमा शौचालय र स्नानघरको ब्यवस्था भइरहेको छ ।
गाउँमा आउने पर्यटकहरुलाई उनीहरुको चाहना अनुसार कोदोको ढिँडो, कोदोको रोटी, दालभात, सेलरोटी, तरुल, भ्याकुर, बन तरुल जस्ता कन्दमूल, कुरिलो, निउरो, सिस्नो, कर्कलो जस्ता अर्गानिक तरकारी, लोकल कुखुराको मासु खुवाउन उनीहरु तयार छन् ।
यस अघि कृषि पर्यटनको केन्द्रको रुपमा पनि खाँचे गाउँ परिचित थियो । लमजुङमै सबै भन्दा पहिले अलैंचीको ब्यवासायीक खेती शुरु भएको ठाउँ यही हो । अहिले पनि थुप्रै गाउँलेहरुले अलैंचीबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
बेसीशहरबाट नजिकै रहे पनि यस अघि भौगोलिक रुपमा विकट भएका कारण खाँचेका कतिपय घरपरिवारले गाउँ छोडे । कति रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका छन् । अहिले गाउँमा मोटर पुगेको छ । बेसीशहर लगायत देशका विभिन्न भागमा जान आउन अब चाहिँ समस्या छैन । “त्यसैले अब गाउँमा विकासको मूल फुटाउनु पर्छ भनेर गाउँमा होमस्टे शुरु गरेका हौं । हाम्रो गाउँबाट विभिन्न हिमाल, डाँडाकाँडा देख्न सकिन्छ । अलैंची खेती, हरिया वनजंगल र तामाङ संस्कृति हामी पर्यटकलाई देखाउँछौं ।” होमस्टे ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोमबहादुर तामाङले भने ।
पर्यटनको चाहना, हाम्रो रोजाई भन्ने नारा लिएर गाउँलेले शुरु गरेको होमस्टेको संघीय सांसद देवप्रसाद गुरुङले हालै उद्घाटन गरेका हुन् । उनले कृषि र जडिवुटीको संभावना रहेको खाँचेका युवाहरु गाउँमै वसेर काम गरे विकास गर्न धेरै समय नलाग्ने बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका सांसद मायानाथ अधिकारीले तामाङ समुदायको संस्कार संस्कृतिको जर्गेना गर्न समेत होमस्टेले मद्दत पुग्ने बताए । बेंसीशहर नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले होमस्टे संचालनका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्वता ब्यक्त गरे ।
बेसीशहर वडा नं. १० का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर थापाले बराहपोखरी तथा मेमे पोखरी जाने पदमार्गमा पर्ने भएकाले खाँचेको पर्यटकीय महत्व बढी रहेको बताए । उनले भने नगरपालिका र वडाले पनि खाँचेको पर्यटन प्रबद्र्धनमा सघाउनेछन् ।
पछिल्लो समय लमजुङका धेरै ठाउँमा होमस्टे खुलेका छन् । नाम चलेका घलेगाउँ, काउलेपानी, राइनासकोटसंगै सिउरुङ, घनपोखरा, नरुवाल, भुजङ, पसगाउँ, गिलुङ, खासुर, गहते, हिलेटक्सार, भुस्मे, छापा, मिप्रा, तुर्लुङकोट, पुरानकोट लगायतका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा होमस्टे सञ्चालित छन् ।
लमजुङ पर्यटकीय जिल्ला भएकाले यहाँ सयौं पर्यटकहरु घुम्न आउँछन् । ग्रामीण भेगमा ब्यवस्थित होटल लज नहुने भएकाले पनि ती होमस्टेले पर्यटकहरुलाई ग्रामीण स्वादमा स्वागत सत्कारका साथमा गाउँले अर्गानिक खानेकुरा दिएर पर्य टकहरुलाई लोभ्याइ रहेका छन् ।